Manangana Serivisy Barbados i Caribbean Airlines
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Manangana Serivisy Barbados i Caribbean Airlines
Caribbean Airlines dia mandefa ny serivisy Barbados any Karaiba Atsinanana manomboka amin'ny 22 Jolay 2020, miankina amin'ny fankatoavana ara-dalàna. Ny sidina dia hiasa eo anelanelan'ny Barbados mankany St.Vincent sy ny Grenadines ary Grenada miaraka amin'ny toeran-tany hafa ampiana raha vao misy ny fankatoavana ara-dalàna.
The fanitarana ny zotra ao amin'ny Karaiba Atsinanana dia ao anatin'ny drafitra stratejika ataon'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka ankehitriny. Tamin'ny fiandohan'ity taona ity dia nahazo fiaramanidina sy loharanon-karena fanampiny ny Caribbean Airlines, anisan'izany ny mpanamory fiaramanidina sy ny ekipa kabine hanohanana ity hetsika ity.
CEO of Caribbean Airlines, Garvin Medera dia nanambara hoe: “Ny fitaterana dia andry lehibe ao amin'ny fanjakana Karaiba, izay manome toerana hanamorana ny varotra, ny fampiasam-bola ary ny fivezivezen'ny olona. Amin'ny isam-paritra sy iraisam-pirenena, betsaka ny tokony hanombohana azy, ary arakaraka ny fankatoavana ara-dalàna dia manohy ny fikasana hanitatra ny làlana any Karaiba Atsinanana ny Caribbean Airlines. Hanomboka any Barbados izany, satria misokatra amin'ny serivisy ara-barotra ny sisin-tany ankehitriny. Ho anay, ny fanatsarana ny fifandraisana dia tetikady efa an-dàlana ary nikasa tamim-pitandremana izany fanitarana izany izahay, amin'ny fampiasana angona sy fikarohana hafa hitarihana ny fanapahan-kevitray. ”
Fandaharam-potoanan'ny sidina avy any BARBADOS mankany ST.VINCENT & GRENADA
Flight Frequency Origin Destination Mialà tonga
BW200 MO, TU, FR, SA SVD GND 6.55 pm 7. 30 hariva
BW201 MO, TU, FR, SA GND BGI 8. 25 hariva 9. 25 hariva
Fipoahan'ny COVID ratsy indrindra any Etazonia, UK, India, Afrika atsimo, Arzantina, Bolivia, Kolombia, Kyrgyzstan
United Airlines: Quarter ara-bola sarotra indrindra amin'ny tantarany